Shiinaha DVD-ga CD-ga yar ee DVD-ga loo yaqaan 'dvd' yar oo la qaadi karo oo leh BT FM USB-ga sameecadaha sameeyaha iyo alaab-qeybiyeyaasha. Sanjin
DVD-ga DVD-ga muusigga yar ee DVD-ga dvd-yar oo la qaadi karo oo leh BT FM afhayeenka USB-ga
Gatway Wireless oo leh shabakad AP APP bilaash ah oo loogu talagalay taleefannada casriga ah / kiniinka isku xirka door Bannaanka smart gudaha gudaha oo caqli badan
Maaraynta: Min. Dalbo: 1000 Cadad
Aaladda Beddelka Amniga
Si looga hortago shilal kasta oo aan loo baahnayn oo ka fog canugga ama si qaldan loo isticmaalo badeecada, nooca MTDVD-Lite wuxuu leeyahay beddel dhisme oo badbaado ah, wuxuu u oggolaanayaa mashiinku inuu ka go'o korontada isla markaana uu isla markiiba xiro. Badalka badbaadada wuxuu ku yaalaa dhamaadka qeybta dambe ee mashiinka si fudud loo arki karo.
Flash Drive (USB) Xogta Xogta
MTDVD-Lite wuxuu ka kooban yahay muujinta Xogta (Nuqul) taas oo u oggolaanaysa dadka isticmaala inay ka nuquliyaan feylasha DVD Disc iyo Flash Drive sida USB Memory Stick. Si kastaba ha noqotee, feylasha waa inay ku jiraan qaababka Mashiinka la akhrin karo.
MTDVD-Lite waxay leedahay laba wax soo saar oo waaweyn oo ku xirmi kara qalab dibedda ah. HDMI wuxuu leeyahay xiriir dhakhso leh, halka fiilooyinka AV ay yihiin isku xirnaan sax ah.
Feature loo maqli karo
Muuqaalka loo yaqaan 'playback' ayaa ka ciyaari kara meel kasta oo isticmaaleyaashu joojiyeen markii ugu dambeysay (TV-yada ama DVD Player), muuqaalkani wuxuu badbaadinayaa tanno dadaal ah oo ku saabsan dhamaadka isticmaalaha.
Naqshadeynta gaarka ah ee Maite Elektaroniga, MTDVD-Lite waxaa lagu dhisay balaastiig adag iyo bir hoose oo mashiinka ah sidaas darteed tani waxay siisaa shoog adkaysi leh.
Chips-ka hore ee ka imanaya SunPlus, mashiinku ma aha oo kaliya culays iyo fudeyd fudud laakiin sidoo kale waa mid si xawli ah ugu socda xawaaraha akhriska oo kaliya qaadanaya 8 ilbidhiqsi ama wax kayar.Maite Electronics waxay rabtaa inay run u sheegto macaamiisheena oo ay bixiso natiijooyinka ugu saxsan ee baaritaanka akhriska codka ayaa ka hooseeya 30 dB.
10W koronto tayo sare leh oo DC5V-2A ah, galinta USB-MICRO aamin ah
Qeybta ugu weyn ee guddiga diktoorka waa SUNPLUS8203R, oo taageerta sameynta iyo soo-celinta CD-yada maqalka ee kala duwan (CD, MP3, WMA)
Taageer kelmadaha codka USB iyo dib u maqal
Dhaqdhaqaaqa SANYO HD850
3.5 soo saarida maqalka ee maqalka dhagaha
Taageerada shaqada raadiyaha FM (taageerida raadinta otomaatiga, qufulka otomaatiga, keydinta otomaatiga)
Taageero loo maqli karo Bluetooth
Taageer loop loo maqli
Waxay taageertaa ku celcelinta shaqada
Waxaa lagu dhejiyay 1 * 2W codka maqalka
Taageer gubista MP4, CD, MP3 USB
Taageero awood u lahaanshaha maqalka
LOGO waa loo habeyn karaa iyadoo loo eegayo macaamiisha
Luqadda menu-ka waa la defayaa iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha
Ka mid ah kontoroolka fog
Heerka maqalka-soo noqnoqodka: 65Hz ~ 20KHz
Impedance qiimeyn: 6Ω
Qaabka codka U-Disk: MP3, WMA, CD
Nidaamka faylka U-Disk: FAT32
Range gudbinta: 10M
Hore: Kaameradda banaanka gudaha ee kamarada casriga ah wirelss nidaamka kormeerka cctv oo leh xakameynta barnaamijka
Xiga: All-in-one karaoke jukebox 15.6 ”oo lagu kordhiyo qalabka wax lagu kiciyo oo leh mikrofoonka wireless-ka ee uhf iyo afhayeenka